Thu, Apr 25, 2019 | 12:35:40 NST
वैशाख ५ – बलिउड अभिनेता वरुण धवन र अभिनेत्री आलिया भट्ट एक पटक फेरि जोडीको रुपमा देखिने भएका छन । यि दुवै फेरि पनि करण जोहरको नयाँ चलचित्रमा सँगै देखिने भएका हुन् । यस चलचित्रमा अभिनेत्री माधुरी दिक्षितको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ ।
वैशाख ४ – कृष्णसारको शिकारको आरोपमा बलिउड अभिनेता सलमान खानलाई अदालतले ५ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो ।
​सलमान खानले सुरु गरे ‘भारत’ को सुटिङ, दश वर्षपछि प्रियंका चोपडासँगै फिल्ममा
वैशाख ४ – बलिउड सुपरस्टार सलमान खानको आगामी फिल्म ‘भारत’ को सुटिङ सुरु भएको छ । साथै उनीसँग चलचित्रको पर्दामा देखिने नायिकाको नाम पनि सार्वजनिक भएको छ ।
​दीपिका फेरि पूर्व प्रेमी रणवीरसँगै
वैशाख ४ – रणवीर कपुर उनकी पूर्व प्रेमीका दीपिका पादुकोणसँग एकचोटी फेरि सँगै देखिने भएका छन् । तर उनीहरु एकसाथ चलचित्रमा नभएर र्याम्प शोमा देखिने भएका हुन् ।
​नायक अनमोल केसीलाई भेट्न भन्दै भागेर आएका ४ जना भारतीय किशोरीको उद्धार
काठमाडौं, वैशाख २ – तपाईंले भारतीय नायक नायिकालाई भेट्न भनेर घरबाट भागेका किशोर किशोरीका समाचार त सुन्नु भएकै थियो ।
​रिता थापा र शिरीष देवकोटाको गीतमा यसरी नाचे दिलिप र सरिष्मा (भिडियोसहित)
काठमाडौं, वैशाख १ – लोकदोहोरी गायक शिरीष देवकोटा र रिता थापा मगरको स्वरमा सजिएको मौलिक लोकभाका ‘चाँचर’ युट्यूबमा सार्वजनिक भएको छ ।
काठमाडौं, चैत ३० – २०७४ साल नेपाली सिने क्षेत्र संगीतमय बन्यो । सिनेमामा समावेश गीतहरुले सिनेमाको प्रचार प्रसार र व्यापारमा पनि उल्लेख्य योगदान गरे ।
पहिलो पटक मोबाइल बोक्दा : कसैको रुवाबासी, कसैलाई वाकवाक
काठमाडौं, चैत २९ – जतिसुकै मोबाइल परिवर्तन गरे पनि पहिलो पटक बोकेको मोबाइल भने हामी कहिल्यै पनि बिर्सन सक्दैनौँ । त्यो अनुभव जीवनमा विशेष बनेर रहेको हुन्छ । यस्तै आज हामीले केही कलाकारहरुलाई पहिलो पटक मोबाइल बोक्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ? भनेर सोधेका छौँ ।
​अभिनेत्री सोनम कपूर यही अप्रिलमै विवाह गर्दै
चैत २९ – बलिउड अभिनेत्री सोनम कपूरको विवाह व्यापारी आनन्द आहुजासँग हुने कुराले अहिले बलिउड तातेको छ ।
काठमाडौं, चैत २९ – मिस नेपाल २०१८ को उपाधि शृङ्खला खतिवडाले जितेकी छन् ।
४४ लागे माग्ने बुढा, यसरी बने महंगा हाँस्य कलाकार
काठमाडौं, चैत २८ – कलाकार केदार घिमिरे (माग्ने बुढा)को बुधबार ४४ औं जन्मदिन परेको छ ।
विवादै विवादमा घेरिएका कपिल शर्माले नयाँ शो गर्न सकेनन्
चैत २७ – भनिन्छ सफलताको शिखरमा पुग्न जति कठिन हुन्छ, पाएको सफलतालाई जोगाई राख्न त्यो भन्दा कठिन हुन्छ । यही कुरा अहिले भारतीय हास्यकलाकार कपिल शर्मालाई लागु भएको छ ।
‘भारतीय जासूस’ आलिया भट्ट बनिन् ‘पाकिस्तानी सेनाकी श्रीमती’
चैत २७ – बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्ट र अभिनेता विक्की कौशलको फिल्म ‘राजी’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ ।
रणवीरले स्वीकारे दीपिकासँगको सम्बन्ध
चैत २६ – बलिउडमा अहिलेको सर्वाधिक लोकप्रिय जोडीको रुपमा अभिनेता रणवीर सिंह र दीपिका पादुकोणको जोडीलाई हेरिन्छ ।
जेलबाट छुटेपछि सलमानकाे यस्ताे अाँसु !
चैत २६ – कृष्णसार मारेको आरोपमा दुई दिनको जेल बसाईपछि मुम्बई फर्किएका बलिउड स्टार सलमान खानले ट्वीट गर्दै प्रशंसकहरुलाई धन्यवाद दिएका छन् । आफ्नो आधिकारिट ट्विटर ह्याण्डलमा सलमान खानले लेखेका छन्, ‘कृतज्ञताका आँसु । मलाई माया र साथ दिने सबै प्रियजनहरुमा जसले कहिल्यै आशा मारेनन् । मलाई माया र समर्थन गरेकोमा सबैलाई धन्यवाद । भगवानले कृपा गरुन् ।’ Tears of gratitude . To all my loved ones who are with me and never lost hope . Thank you for being there with all the l...
‘ब्ल्याक प्यान्थर’ ले तोड्यो टाइटानिकको रेकर्ड
चैत २६ – रायन कुगलरको निर्देशनमा बनेको फिल्म ‘ब्ल्याक प्यान्थर’ले हलिउड इतिहासमा रेकर्ड कायम गरेकाे छ ।
`कान्छी हे कान्छी'को अमेरिकामा रेकर्डिङ, नेपालमा सुटिङ
चैत २६ - किशन रेग्मी र श्रुति योगीले आवाज दिएको प्रलाद रिजालको गीत `कान्छी हे कान्छी'को सुटिङ सकिएको छ । सिल्पा पोख्रेल र पृथ्वीराज प्रसाईले फिचरिङ गरेको म्युजिक भिडियोलाई उत्सव दाहालले खिचेका हुन् ।
​राजाले घुँडा टेकेको दिन कलाकार राजाको हाँस्यव्यंग्य साँझ
आज चैत २६, पहिलो जनआन्दोलन सफल भएको दिन । प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि २०४६ साल फागुन ७ गते सुरु भएको जनआन्दोलनले चैत २६ गते सफलता पाएको थियो । नागरिकको अधिकार फिर्ता गर्न तत्कालीन राजा बाध्य भएका थिए ।
सलमानलाई भेट्न कट्रिनासँगै बलिउडका अन्य कलाकार पुगे 'ग्यालेक्सी अपार्टमेन्ट'
चैत २५ – कृष्णसार (कालो हरिण) मारेको आरोपमा जेल गएका बलिउड अभिनेता सलमान खान शनिबार जेलबाट रिहा भएका छन् । सलमान मुम्बई पुग्ने बित्तिकै बलिउड अभिनेत्री कटरीना कैफ उनलाई भेट्न घरमै पुगेकी छिन् ।
जेलबाट घर फर्किए सलमान
चैत २४ – कृष्णसार (कालो हरिण) मारेको अभियोगमा जेल परेका बलिउड अभिनेता सलमान खान रिहा भएका छन् ।
सलमान खान धरौटीमा रिहा हुने
चैत २४ – कृष्णसार (कालो हरिण) मारेको आरोपमा दोषी ठहरिएका बलिउड अभिनेता सलमान खानलाई जोधपुरको एक अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
सलमानको मुद्धा हेरिरहेका न्यायाधीशको सरुवा, आज पनि जेलमै !
चैत २४ – राजस्थान उच्च अदालतले एकै पटक ८७ जना न्यायाधीशहरुको सरुवा गरेको छ ।
‘शत्रु गते’ हेर्न नेता नेपाल र श्रेष्ठ सिटी म्याक्समा
काठमाडौं, चैत २४ - सधैँ राजनीतिक बैठक र कार्यक्रममा व्यस्त हुने दुई नेता शुक्रबार साँझ नेपाली चलचित्र ‘शत्रु गते’ को दर्शक बन्न भ्याउनु भएको छ ।
​राजेशपायल राईको गाडी दुर्घटना
गुल्मी, चैत २३ – चर्चित गायक राजेशपायल राई सवार गाडी दुर्घटनामा परेको छ । गुल्मी महोत्सवमा सहभागी हुन जानेक्रममा दुबीचौरमा राई चढेको गाडी दुर्घटनामा परेको हो ।
​जसको बयानले सलमान खान जेल पुगे
चैत २३ – ती आँखामा त्यो कालो हरिणको शिकार १९ वर्षसम्म ताजै रह्यो । १९ वर्षसम्म त मुद्धा नै चल्यो ।
गाउँलेलाई बन्दुक देखाएर भागेका थिए सलमान खान
चैत २३ – हिन्दुस्तान दैनिकमा छापिएको समाचार अनुसार कालो हरिण(कृष्णसार) को शिकारपछि सलमान खान गाउँलेलाई बन्दुक देखाएर भागेका थिए ।
सलमानको जमानत टर्‍याे, आज पनि जेलमै बस्नुपर्ने
चैत २३ – कालो हरिण मारेको आरोपमा दोषी मानिएका बलिउड अभिनेता सलमान खानले शुक्रबार पनि जमानत पाउन सकेनन् ।
चैत २२ - चलचित्र ‘बागी २’ सफल भएसँगै अभिनेता टाइगर श्राफ अर्को चलचित्र ‘स्टुडेन्ट अफ द इयर २’ को सुटिङका लागि जुटिसकेका छन् ।